Ogaden News Agency (ONA) – War-murtiyeed: Shirkii wada tashiga hawl-wadeenada JWXO 4-6 January kasocday frankfurt, Gernamy
War-murtiyeed: Shirkii wada tashiga hawl-wadeenada JWXO 4-6 January kasocday frankfurt, Gernamy
Posted by ONA Admin	/ January 7, 2013
Shirkii wada tashiga hawl-wadeenada JWXO
4-6 Janaury 2013
Waxaa lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka shir ay isugu yimaadeen hawlwadeenada JWXO ee Yurub taarikhdu markay ahayd 4 ilaa 6da Janaayo 2013. Shirkaas oo aay ka soo qayb galeen hayadaha kala duwan ee JWXO iyo hawl-wadeenadooda ayaa waxaa lagu qiimeeyay heerka halganka uu marayo, horumarkuu gaadhay, caqabadaha hor yaala iyo sidii looga gudbi lahaa. Waxaa laga dooday qodobo muhiim ah oo saamayn wayn ku leh halganka gobanimodoon ee JWXO ay hogaaminayso.
Dood cilmiyeeysan iyo falanqeeyn ka dib, waxaa hogaanka iyo hawlwadeenada JWXO is la qireen in guulo waaweeyn la soo hoyay waxaana shirku go ‘aansaday :
In halganka hubaysan ee aayaha S. Ogaadeenya lagu raadinayo uu sameeyay horumar muuqda waxayna xubnuhu go’aansadeen in ay sii dardar galiyaan .
In dhinaca siyaasada iyo diplomaasiyada la xoojiyo, diiradana la saaro goobaha saamaynta wayn ku leh qadiyada, in la xoojiyo xidhiidhka shacabka Soomaaliyeed ee dalalka kala duwan ee Afrikada Bari ku nool, iyo in jabhadaha iyo mucaaradka Itoobiya ee aan isku danta nahay isbahaysigooda la xoojiyo.
In la adkeeyo midnimada shacabkeena gudaha iyo dibadaba, lana fashiliyo shirqoolada cadawga.
Wuxuu kaloo shirku is la gartay in maamulka Itoobiya uu ku yahay caqabad xasiloonida, nabadgalyada iyo horumarka shucuubta iyo dalalka Geeska Afrika, sidaa daraadeed loo baahan yahay in la iska kaashado sidii ujeedooyinkooda guracan loo dhicisayn lahaa.
Shirku wuxuu si aad ah u qiray ugana tiiraanyooday sida waxashnimada leh ee taliska gumaysiga Itoobiya ugu tumanayo xuquuqdooda siyaasadeed, dhaqaale iyo bani’aadanimo, wuxuuna ugu baaqayaa dowladaha caalamka in ay qaadaan talaabooyin lagu badbaadinayo shacabka la ciribtirayo.